Caweeska wararka Radio Fabrik | cba – cultural broadcasting archive
Barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadan doona warar ay kamid yihiin: Ra’isul wasaarha Hungry Victor Orban oo ku tilmaamay qaxootiga Yurub imaanaya in ay yihiin “SUN“ Wasaarada arimaha dibada Austria oo u yeertay safiirka Turkiga ka fadhiya Vienna iyo Nin xildhibaan hore uga ahaa Soomaliya fal is-miidaamin ah ka geeystay Muqdishu.
Ciyaaraha waxaan kusoo qaadan doona: Koobka gobolada oo xamar lagu soo gaba gabeeyay iyo kooxdii ka socotay Puntland oo ku guuleystay kadib markii ay kaga adkaadeen Finaalka kooxdii ka socotay Jubaland.
Ganacisga iyo dhaqaalaha waxaan kusoo qaadan doona qodobo ay kamid yihiin: shirikada taleefanada Mareykanka Verizon oo iibsatay Yahoo. Nintendo oo ah shirikad sameysaa ciyaaraha lagu ciyaaro taleefanada oo khasirtay iyo ciyaarta caanka sii noqoneysa ee POKEMON Go oo loo sababeynayo hoos u dhaca ku yimid Nintendo suuqa saamiyada Tokyo ee Nikkei.
Barnaamijka cafimaadka sadaal waxaa qeyb ka noqon doona: Maraq digaaga oo la sheegay inuu u daranyahay caafimaadka iyo tuunta oo cuduro badan oo dhiig karku kamid yahay faa’iido u leh.
Barnaamijka inta uu socdo waxaa qeyb ka noqon doona heeso aad u macaan oo isugu jira kuwii hore, kuwii dhexe iyo Kuwii ugu danbeeyay.
Argatidiina waxaad inoogu soo hagaajin kartaan E-mailka: sleepnotlonger@gmail.com